Ny Vahaolanay Laser - MimoWork
CO2 Laser Machine ho an'ny fitaovana tsy metaly
Fitaovana mifanaraka amin'ny laser cutter:
> Acrylic (PMMA)
> Hazo (MDF)
> Lamba vita pirinty (lamba)
> Lamba mahatohitra (lamba)
CO2 Laser Machines avy amin'ny MimoWork dia nanompo mpanjifa manerantany amin'ny sehatra samihafa.Ny milina laser marin-toerana sy azo itokisana ary mpitari-dalana sy serivisy tsara dia mitondra fanatsarana ny famokarana malaza amin'ny fahombiazany sy ny vokatra.
Ny fahaizana mikaroka hatrany dia miantoka ny teknolojia laser avo indrindra amin'ny mpanjifa!
Izay mety aminao no tsara indrindra
MimoWork tamin'ny laser dia manasokajy ny vokatra tamin'ny laser ho sokajy 4 araka ny filan'ny famokarana manokana ny mpanjifa sy ny fepetra.
Equipped amin'nyfakan-tsary HD & fakan-tsary CCD, Contour Laser Cutter dia natao hahatanteraka ny fanapahana mazava tsy tapaka ho an'ny fitaovana vita pirinty sy modely.Ny rafitra laser fahitana marani-tsaina dia manampy anao hamaha ny olan'nycontour recognitionregradless amin'ny loko mitovitovy amin'ny fitaovana,fametrahana modely, deformation ara-nofoavy amin'ny sublimation loko mafana.
Jereo ny modely rehetra
Ampifanaraho amin'ny fampiharana anao, ny milina fanontam-pirinty CNC laser matanjaka dia miantoka ny kalitao ho an'ny fampiharana mitaky indrindra.Ny famolavolana X & Y gantry no rafitra mekanika miorina sy matanjaka indrindraizay miantoka ny vokatra fanapahana madio sy tsy tapaka.Ny laser cutter tsirairay dia mety ho mahaymanamboatra fitaovana isan-karazany.
Ultra-hainganano teny hafa avy amin'ny Galvo Laser Marker.Ny fitarihana ny taratra laser amin'ny alàlan'ny fitaratra maotera, ny milina laser Galvo dia manambara ny hafainganam-pandeha avo dia avo miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta sy ny famerenana.MimoWork Galvo Laser Marker dia afaka mahatratra ny laser marika sy ny sokitra faritra avy amin'ny 200mm * 200mm ny 1600mm * 1600mm.
Ny Digital Laser Die Cutting Machine dia ampiasaina betsaka amin'ny fanodinanaetikety nomerika sy fitaovana fisaintsainana ho an'ny akanjo miasa.Mamaha izanyny olan'ny vidin'ny fanjifana fitaovana fanapaha-vato mahazatra, mitondra fahafaham-po amin'ny habetsaky ny baiko samihafa.Fampisehoana fanodinana tsara amin'ny UV, lamination, slitting, dia mahatonga ity milina ity ho vahaolana tanteraka amin'ny fizotran'ny marika nomerika aorian'ny fanontana.
Aza manahy raha mbola very hevitra ianao
Tongava aty aminay ho an'ny Laser System Consulting
Manampy ny SME toa anao isan'andro izahay!
Inona no fiheverana sy toro-hevitra tokony ho tratrarina rehefa mitady fanovana fomba machining vaovao ianao na mampiasa milina laser?
Tsy isalasalana fa tena ilaina ny consulting mialoha ny fivarotana mba hianarana momba ny filanao sasany.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao 20 taona lalina amin'ny fampivelarana sy fahatakarana ny teknolojia laser sy ny fampiharana indostrialy, ny mpanolo-tsainay dia hamaly ny fanontanianao ary hanome torohevitra momba ny fanodinana mety ho anao sy ny orinasanao.
Afaka mandeha mihoatra ny mahazatra ianao
Safidy laser fanampiny sy multifunctional dia azo ampiasaina amin'ny fepetra takiana samihafa.Ny safidy laser namboarina sy manokana dia mitranga ary mamorona fahafahana bebe kokoa amin'ny famokarana mahomby sy malefaka noho ny fandalinana tsy tapaka momba ny rafitra laser sy ny asa lany.Mitondra safidy laser manokana ho an'ny fangatahanao famokarana isan-karazany izahay.
Jereo ny safidy rehetra
Mangataha fitiliana laser amin'ny fitaovanao izao!